वेतन वेतन को लागी काम गर्न को लागी, धेरै मा महसूस गर्छन यो केहि स्थिरता छ। जो केहि पनि भन्न सक्छ, रोजगारीले स्थिरताको रूपमा त्यस्तो गुणस्तरमा नपुगेको छ। किनभने कर्मचारी कटौती गर्न, खारेज गरिएको, अर्को व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित हुन सक्छ। त्यहाँ स्थिरता छ कि सानो छ, र अझ धेरै पनि काममा।
तर यो अधिक राम्रो चीजहरू हो, जस्तै प्रीमियम। धेरै संस्थाहरूमा, वेतन को बावजूद, त्यहाँ बोनस प्रणाली हो। बोनस कर्मचारी प्रक्रिया सुखद र सार्थक छ। पुरस्कारको मनमा भौतिक प्रोत्साहन हो। धेरै थोरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको वेतनमा नगद बोनस प्राप्त गर्न अस्वीकार गर्नेछन्। बोनस प्राप्त गर्ने मौका अधिक प्रभावी कामको लागि उत्प्रेरकको रूपमा कार्य गर्दछ। पछि, हरेक नियोक्ता चासो छ।
कसलाई र के लागि?
कर्मचारी बोनस विभिन्न तरिकामा भुक्तानी गरिन्छ, प्रायः प्रायः सैनिकहरूको विवेकमा। कर्मचारीहरूको लागि बोनस तिनीहरूको बहुभाषीमा फरक छ। सबै कुरा कर्मचारी र सम्पूर्ण गतिविधिको गतिविधिको विवरणमा निर्भर गर्दछ।
यसैले कर्मचारीहरू फर्वार्ड गर्ने मापदण्ड एक वित्तीय योजनाको उपलब्धि हुन सक्छ। यस अवस्थामा, महिना को अन्त सम्म प्रत्येक कर्मचारी को बोनस प्राप्त हुनेछ। प्रीमियमको आकार प्रतिशत सर्तमा, उदाहरणका लागि, वेतन मा निर्भर गर्न सक्छ।
प्रीमियम गणना गर्ने एक फरक फरक तरिका सम्भव छ। प्रत्येक विभागको लागि, एक विशिष्ट योजना तैयार गरिएको छ (अनुबंध निष्कर्ष निकाल्ने संख्या, एक निश्चित रकम बिक्री, आदि) र, यदि यो प्राप्त हुन्छ भने यस एकाइको कर्मचारीले बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ। या त बराबर शेयर मा, वा, फेरि, वेतन को आधार मा।
एक कर्मचारी द्वारा संगठन को मूल्य को एक मामूली सामाग्री बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर अझै सम्म उनको रचनात्मकता को पर्याप्त रूप देखि प्रकट नहीं गरेको छ। यस्तो कर्मचारीलाई प्रेरित गर्न अधिकारीले उनलाई एक मामूली तर सुखद मौद्रिक बोनसको इनाम दिन सक्छन्। यहाँ मुख्य कुरा यो अधिकृत छैन कि एक कर्मचारी यस्तो बोनस प्राप्त गर्न (विशेष योग्यता बिना) प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन। यो राम्रो तरिकाले राम्रो छ, तर ठीक छ।
के तपाई दस्तावेजहरुको साथ ठीक छ?
यदि हामी कर्मचारीहरूलाई बोनसहरूको वृत्तचित्र प्रमाणबारे कुरा गर्छौं, त्यसपछि प्रत्येक संगठनमा कागजातहरूको निश्चित सेट तैयार गरिनेछ। कर्मचारीहरूको रूपमा बोनसहरूमा नियमहरू, एक नियमको रूपमा, बोनसको भुक्तानीको शर्तहरू समावेश गर्दछ, यी भुक्तानीहरूको रकम, शर्तहरू जसको अधीन कर्मचारीले प्रीमियमबाट बञ्चित हुन सक्छ। यो दस्तावेज प्रायः एक एकाउन्टेंट द्वारा विकसित गरिएको छ। आदर्श रूपमा, कर्मचारीहरूलाई इनाम दिने निर्णय पछि, एक अर्डर अर्डर ड्राफ्ट हुनु पर्छ, जुन मुख्य कार्यकारी वा निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित। अर्डर आधिकारिक रूपमा कसलाई पुष्टि गर्दछ र कुन रकम बोनस थपिएको छ, साथ साथै यसको भुक्तानीको सर्तहरू (सधैँ)।
बोनस कर्मचारीको अवमूल्यन, यदि त्यस्ता कुरा चाहिन्छ भने वैध हुनुपर्छ। पुरस्कार मनाउनको कारण नेताको व्यक्तिगत नमनपराउनु हुँदैन कर्मचारी वा केही व्यक्तिगत अपमानित। कामको बेइमानी प्रदर्शन, कुनै जिम्मेवारी र अपमानजनक मनोवृत्तिको लागि यो प्रीमियमबाट बच्न सम्भव छ। कर्मचारीले कस्तो प्रकारको गल्तीको बारेमा जान्नुपर्दछ त्यो पुरस्कारबाट बञ्चित भए तापनि उहाँले यो सहमत छैन, जुन पनि हुन्छ।
कर्मचारीहरूलाई निष्पक्षता र निष्पक्षता सिद्धान्तमा आधारमा पुरै सम्मानित हुनुपर्छ। यदि एक व्यक्तिले प्रयास गर्यो, "पूर्णतया" आफ्नो काम गरे, आफ्नो कर्तव्य संग प्रतिलिपि गरे, त्यसपछि उहाँले इमानदार रूपमा आफ्नो इनामको योग्यता गर्नुभयो। तथ्य यो हो कि तिनका कामहरू अनावश्यक भएन, त्यसोभए तिनलाई उत्पादक रूपमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। प्रत्येक काम को इनाम दिइन्छ, यस्तो कानून हो।
Freelancer - यो को हो र कसरी एक सफल फ्रीलान्सर हुन सक्छ?
बिक्रीमा वस्तुहरूसँग काम गर्दै
म ग्रेड 11 पछि कहां जानुहुन्छ?
एक कर्मचारीसँग निश्चित अवधिको रोजगार अनुबंध
संयुक्त खरिद - के यो छ र कसरी संयुक्त खरिदमा पैसा कमाउन सक्छ?
एक प्रतिलिपि लेख कसरी गर्ने?
रोग बिरामीको लागि बीमा रेकर्ड
किशोरका लागि स्कूल स्कर्ट
पल्स उमेरको नियम र हृदय दर सही गर्न को लागी उत्तम तरिका मा आदर्श हो
क्रिस्टिना Aguilera को आहार
स्याउको रूखमा कालो क्यान्सर - उपचार
एन्जिलिना जोलीले डेभेन्टल कन्टाइन्डर घटनामा भाग लिन मिनी ड्रेसमा एक ओन्टोग्राफ सत्र बनायो
नवजातिका लागि फोटो थेरेपी
घरमा स्नोरिंग - उपचार
गर्भावस्थाको योजना हुँदा मैले कस्ता परीक्षाहरू लिनुपर्छ?
गर्भावस्थाको दोस्रो हप्ता - के हुन्छ?
रिम संग हेयर स्टाइल
नयाँ वर्षको मग
कपाल हेरविचार - सुझावहरू विभिन्न प्रकारका कपालहरूको लागि trihologa
मक - उपयोगी गुणहरू
ड्रेस र स्नीकर्स
एन्कोलोजी मा विकिरण चिकित्सा
एपिलेशन पछि कसरी जलन हटाउने?
आवश्यक तेलको Neroli